Fantaro Ilay Olon’ny Sarimiaina Vaovao Malaza Ao Krimea, Natalia Poklonskaya · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Marsa 2014 14:51 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Deutsch, Français, 日本語, বাংলা, English
Lasa aingam-panahy hoan'ny mpankafy haikanto Japoney sy Rosiana ny tarehy malefaka saingy hentitra an'i Poklonskaya, miresaka amin'ny mpanao gazety ary voahodidina mikrô. Nalaina avy amin'ny manga (tantara an-tsarimiaina Japoney) ny ankamaroan'ireo sary ary miompana betsaka amin'ny endrika “mahafatifaty” na “kawaii” amin'ny vatan'i Poklonskaya. Taorian'ny fisehoana voalohany tao amin'ny toerana hoan'ny mpanakanto manga Japoney Pixiv [jp], niely tao amin'ny RuNet sy ny tabilaontsary ireo sary, tahaka ny Pikabu.ru [ru], fakan-tahaka mahaliana isan-karazany amin'ny karazany.
Eny, mety hoe hosoka ilay kaonty Twitter-ny satria taminà resadresaka [ru] tamin'ny 19 Marsa, nilaza i Poklonskaya fa tsy manana kaonty ao amin'ny tambajotra sosialy tahaka ny Twitter. Raha hosoka tokoa, mety miaraka amin'ireo kaonty hosoka roa (@sergyaksenov sy @AksenovCrimea) an'ny Praiminisitra ao Crimea Sergey Aksyonov, izay nanambara ihany koa fa tsy mampiasa tambajotra sosialy. Matetika miteraka fibosesiky ny hadalàna mahatsikaiky ny fihanaky ny hosoka amin'ny kaonty Twitter Rosiana – omaly ohatra, nanontany [ru] ny Twitter hosoka an'i Ramzan Kadyrov raha hosoka ihany koa ny kaontin'i Poklonskaya (nilaza ilay nisioka fa tsia).
Eto i Poklonskaya mahita azy ho fanandramana fanaovana fotoana.